China Disposable Face Mask Packing Machine ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Gongming Automation Technology Co. , LTD
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မျက်နှာမျက်နှာဖုံးအထုပ် > တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးစက်
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံ Dongguan တွင်တည်ရှိပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အားအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သောမျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးထုပ်ကိုပေးလိုပါသည်။
We are an innovative enterprise, established in 2008, located in Dongguan,China. As the professional manufacture, we would like to provide you တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးစက်.
ပထမအဆင့် - ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သင်လိုချင်သော parameters များကိုသတ်မှတ်ခြင်း sreccn
ဒုတိယအဆင့် - ပစ္စည်းများကိုသံမဏိတိုင်ပေါ်သို့တင်ပါ
တတိယအဆင့် - သံမဏိအိတ်ပြုလုပ်သည့်စက်သည်အိတ်ပုံစံကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်
4th အဆင့်: နောက်ကျောတံဆိပ်ခတ်ကိရိယာသည်ရုပ်ရှင်အတူတူတံဆိပ်ခတ်လိမ့်မည်
၅ အဆင့် - ဖြတ်တောက်သောကိရိယာသည်အိတ်အားအလိုအလျောက်ဖြတ်လိမ့်မည်
6 အဆင့် - ခါးပတ်ထုတ်ကုန်ပေါ်သုတ်စက်သည်ကုန်ပစ္စည်းကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်
၎င်းသည်တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ထိတွေ့နိုင်သောလူ - စက်မျက်နှာပြင်၊
ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ ပြtroubleနာကိုအလွယ်တကူဖတ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောအာရုံခံကိရိယာဓာတ်ပုံ - လျှပ်စစ်အရောင်ဇယားခြေရာခံခြင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်းအနေအထားကိုပိုမိုမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပါ။
မှီခိုအပူချိန် PID ကိုထုပ်ပိုး membrane.Position ရပ်နား function ကို, အဘယ်သူမျှမကော်နှင့်အမြှေးပါး၏အဘယ်သူမျှမစွန့်ပစ်၏အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်သောထိန်းချုပ်။
ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကိုဆော့ (ဖ်) ဝဲမှလုပ်ဆောင်သည်၊ လုပ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်နည်းပညာအဆင့်မြှင့်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသည်။
Main Features of တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးစက်
၁။ Panasonic ၏ double transducer control၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အိတ်အရှည်။ အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။
၇ လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ရန်ဘာသာစကားမျိုးစုံ။
၃။ သွင်းကုန် PLC စနစ်၊ စက်စွမ်းဆောင်ရည်သည်တည်ငြိမ်ပြီး၊
(၄) ကိုယ်တိုင်ရောဂါရှာဖွေခြင်းပျက်ကွက်ခြင်း၊ စက်အမှားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသောထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်သောသီးခြား PID အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်သူ
၆။ မျက်လုံးအမှတ်အသားခြေရာခံခြင်းအတွက်မြင့်မားသော sensitivity optical photocell၊ အနေအထားကိုဖြတ်တောက်ရန်အတွက် digital input ဖြစ်သည်။
၇။ ရပ်တန့်ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကော်နှင့်အမြှေးပါးမစွန့်ပစ်ဘဲဖြတ်တောက်ထားသောမေးရိုးများကိုကာကွယ်ပါ။
၉။ ကုန်ပစ္စည်းအရသွင်းအားသွင်းစက်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တွန်း၊ ခါးပတ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
Hot Tags: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသည့်အိတ်၊ ဖုန်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ , CE, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, လွယ်ကူသော - ထိန်းသိမ်း, နောက်ဆုံးရောင်း, တစ်နှစ်အာမခံ